Inyaniso emva kweprojekthi yoyilo -Ii-Creativos ezikwi-Intanethi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngamaxesha amaninzi, kukho utyekelo lokulungelelanisa umsebenzi ohambelana nemizobo kunye noyilo lwewebhu. Kwaye nangona kungekho mathandabuzo ukuba ngomnye wemisebenzi oqhele ukoneliseka kakhulu kwinqanaba lomntu, njengoko kulindelwe, ayisiyiyo yonke into efanelekileyo njengoko inokubonakala ngathi ivela ngaphandle. Ekuboneni kokuqala. Ubunyani beprojekthi yoyilo bahlala bohlukile.
Kule posi siza kuthetha kancinci malunga nezizathu ezininzi zeeprojekthi umzobo kunye / okanye uyilo lwewebhu. Yintoni esinokuyifumana xa siqala ukusebenzela iiprojekthi zokwenyani kunye nabaxumi.
Zonke ezi zinto zikhankanyiwe apha ngasentla, asiliphathi eli nqaku njengesikhalazo somyili okrakra kude nayo.. Ndicinga ukuba uninzi lwabayili, umsebenzi ofunyenweyo kunye nowenziweyo uthathwa ngomdla omkhulu. Kwaye oku kuhlala kungumceli mngeni wokuxhaphaza ubuchule nakumacandelo abonelela ngendawo encinci yoyilo.
1 Iprojekthi ephezulu yoyilo, eyayingekho kangako
2 Umthengi ungxamile
3 Lungile, lichanekile kwaye lichanekile
4 Umthengi ucinga ukuba uyilo
5 Uyilo oluhle nolusebenzayo
Iprojekthi ephezulu yoyilo, eyayingekho kangako
Umxhasi akazimiselanga kuyilo loyilo kunye nokugqwesa ngokugqithileyo. Kulapho izigqibo zakho zinqunyelwe kuluvo lwabathengi. Ngapha koko, oku kusikelwa umda kuhlala kubangelwa ngumthengi onoluvo oluncinci lobuchwephesha. Ngaphezulu Iyadandathekisa. Kwaye bambalwa abo banobuganga ngale ngcamango. Oku kungenxa yezinto ezininzi:
Umthengi akanamali yaneleyo yokutyala imali. Ishishini elincinci kuya kufuneka lizinciphise ngeendlela ezininzi. Kodwa ayisiyiyo kuphela ishishini elincinci eliza kukunciphisa. Inkampani enkulu ifuna inani elikhulu leekopi. Kwimeko yamakhadi oshishino, iinkampani kufuneka zibone kakuhle ukuba ziyakufanelekela njani ukuchitha loo mali
Yinkampani enomfanekiso ochaziweyo kwaye abafuni ukushiya umgca osele wenziwe. Kakhulu, yenza i-restyling, kodwa enye into encinci, kuba abaphathi abaphambili benkampani, bahlala ngaphandle komkhwa, banqabile ukutshintsha umfanekiso.
Kwithiyori inokubetha kakhulu kodwa xa kufika ixesha lokufaka uyilo kwifomathi ebonakalayo, Umthengi ukhetha ukuthatha indlela egcina ngakumbi, esoyika ukuba umsebenzisi azive ngathi "ulahlekile".
Eli nqaku lilula, iiprojekthi kunqabile ukuba zingxamiseke. Sonke singathanda ukusebenza singqongwe ngumoya woxolo kwaye ngaphandle kokungxama, apho ubuchule buhamba khona, hamba uye ehlathini ubonakalise iprojekthi kunye nabanye, kodwa inyani kukuba abathengi bahlala becela ixesha elimisiweyo. Ngokucacileyo kufuneka "siwukhusele" umsebenzi wethu kwaye sifikelele kwisivumelwano, kuba ukuba yonke into ihamba kakuhle, asizukuphuhlisa oko kuphela, kodwa iiprojekthi ezininzi kwaye kufuneka sifumane ixesha lokuphuhlisa nganye nganye.
Lungile, lichanekile kwaye lichanekile
Xa ifika kweli nqanaba inokungapheli. Njengoyilo kufuneka usete umjikelo ophakamileyo wezilungiso kunye nomthengi. Izilungiso ezibini ubuninzi ziya kuchaneka. Ewe kunjalo, ukuba yiprojekthi enkulu, kuphela ezi zimbini aziyi kwanela.
Akunakwenzeka ukuyila kunye nenkqubo yewebhusayithi enee-2/3 kuphela zokujikeleza kwezilungiso. Injongo kukwenza ukuba umxhasi onwabe kwaye ukuba sisebenzela ixabiso elifanelekileyo, ngaphandle kokunika umsebenzi wethu, oko kuya kubandakanya iimfuno zabathengi, ekufuneka sizifezekisile ubuncinci kangangoko. Oku kubandakanya ukwenza ujikeleziso lwezilungiso, uninzi.
Ngokwesiqhelo, inkulu inkampani esiyisebenzelayo, kokukhona liya likhulu inani lezilungiso, kuba uthethathethwano ludla ngokuba nzima ngakumbi.
Kodwa ayizizo zonke iingxoxo ezinjeNgokuqinisekileyo uya kufumana umntu oxabiseke kakhulu emsebenzini wakho. Kule meko, ngokuqinisekileyo uya kusebenza ngokuzimisela okungenakulinganiswa kunye nobubele kumthengi.
Umthengi ucinga ukuba uyilo
Inxulunyaniswe kangaphambili, kuqhelekile ukufumana abathengi "ababeka izandla" kuyilo ngokungathi babenomyili oyile ngaphakathi. Oku kuya kuphakamisa ukuba utshintshe uyilo ngokuthanda kwaye kwimeko embi baya kukunyanzela ukuba wenze njalo. Ewe ungala kwaye ungene kwingxabano, kodwa eyona nto ilula iyakuba kukuba xa sele uzame ukubakholisa ukuba umbono wabo awulunganga, qhubela phambili ngale nto bayifunayo.
Uyilo oluhle nolusebenzayo
Uyilo oluhle ngokukodwa alunamsebenzi ukuba alwenzi ngqondo. Nokuba ilogo, iphepha lewebhu okanye ikhathalogu, uyilo kufuneka luhlangabezane neemfuno ezithile.
Oku kunokuhlala kusika amaphiko elona candelo lethu loyilo njengabaqulunqi begraphic, kodwa inyani kukuba kuqhelekile ukusebenzela iinkampani ezinikezela ngemveliso okanye ngenkonzo enokuthi ngamanye amaxesha icothise ubuchule. Sonke sinamaphupha okusebenza kwiiprojekthi apho sinokuphuhlisa elona cala lethu liyiliweyo, kodwa inyani kukuba oku bambalwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Inyani emva kweprojekthi yoyilo